Hichapụ iTunes Library duplicated Songs
Akara ngosi nke TunesGo na PC gị na kwesịrị ịbụ abụọ clicked na ga-emeghe software. A n'ụlọ ihuenyo dị ka onye e nyere dị n'okpuru screenshot ga-apụta.
Nzọụkwụ 2. Họrọ Music nke iTunes n'ọbá akwụkwọ
Ọzọ, ị mkpa ịchọta dịnụ tracks na ugbu a na gị iTunes Library na n'ihi na nke a nhọrọ nke "Music" ugbu n'okpuru iTunes Library on aka ekpe n'akụkụ menu nke gị TunesGo kwesịrị ka a pịrị. (Nseta ihuenyo egosi red akara igbe)
Nzọụkwụ 3. họrọ "ọcha" - "Hichapụ duplicated songs" ọrụ
Ugbu a n'elu menu mmanya nke TunesGo, họrọ "dị ọcha Up" nhọrọ na ga-emeghe a dobe ala menu nke "Hichapụ oyiri Songs" kwesịrị ka a họrọ.
Nzọụkwụ 4. click bọtịnụ "Hichapụ"
Ugbu a, ị ga-enwe a ndepụta na ọnụ ọgụgụ nke oyiri songs ugbu a na gị n'ọbá akwụkwọ. Ndepụta nke duplicates nwere ike họrọ na ndabere nke dị iche iche ibiere dị ka aha, nka, album, genre, size. (Nseta ihuenyo egosi 7 oyiri songs on ndabere nke Artist). Iji wepụ oyiri click on nhọrọ nke "Hichapụ Duplicates" ugbu na aka nri n'akụkụ.
Ọzọ: Wepụ iTunes Ne n'Ụzọ